'သတိရှိခြင်း' တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (UK Therapist Paula Hall) - သင့် ဦး နှောက် On Porn ကိုလေ့လာခြင်း
'' အောက်မေ့ '' တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (ဗြိတိန်ကုထုံး Paula ခန်းမ) ၏အနုပညာသင်ယူခြင်း
ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာသည့်အမျိုးသားများအနေဖြင့်မိမိတို့၏ ဦး ခေါင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်းထောင်ချောက်ထဲမကျဘဲမိမိကိုယ်ကိုထိတွေ့ခြင်းကိုခံစားရန်ရုန်းကန်နေကြရသည်။ အချို့သူများအတွက်၊ မင်းသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြန်လည်ခံစားနိုင်မည်ဟုထင်သောပုံများနှင့် ဦး နှောက်မပါဘဲသင်ဆွဲဆောင်ထားသူကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းဖြင့်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဟုခံစားရသည်။ ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။
ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိအခြားစာမျက်နှာများမှသင်သိရသည့်အတိုင်း၊ အင်တာနက် porn နှင့်ပတ်သက်သောပြproblemsနာများစွာအနက်တစ်ခုမှာသင့် ဦး နှောက်ကိုညစ်ညမ်းမှုကိုမှီခိုရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂ အပျိုဖော်ဝင်ချိန် မှစ၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြသူများအတွက်သင်သည်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲအော်ဂဇင်ကိုတစ်ခါမျှမခံစားရဖူးပါ။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်ဖောက်သည်များနည်းတူစိတ်ကူးယဉ်မှုကင်းစင်သည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ထူးဆန်းသောစိတ်ကူးကိုစဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်မတိုင်ခင်ကောင်းမွန်တဲ့ရှေးကာလကိုကြည့်ကြစို့။
မြန်နှုန်းမြင့်သောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုမမွေးဖွားလာသည့်ယောက်ျားအများစုသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ထိတွေ့မှုကိုထိတွေ့ခြင်းဖြင့်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိမိပြီးခံစားခဲ့ရပါတယ်။ နှစ်များကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့သည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်မိတ်ဆက်ခဲ့ကြပြီး၎င်းသည်ရံဖန်ရံခါအထူးသီးသန့်ပြုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားဆွဲဆောင်ထားသည့်လူများနှင့်လည်းသူတို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားမိကြလိမ့်မည်။ သို့သော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့သူတို့စတင်ခြင်းသည်သူတို့ထိတွေ့မှုမှသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်သည့်ခံစားမှုများ၏သာယာကြည်နူးဖွယ်ကောင်းမှုအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဒီတော့သူတို့ပြန်လာနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံပါ။ မြန်နှုန်းမြင့်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုယူဆောင်လာသည့်ကလေးများအတွက်သင်သင်ယူနိုင်သည့်စွမ်းရည်အသစ်ဖြစ်သည်။
ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏အစောပိုင်းအဆင့်များတွင်လူများစွာသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ အချို့သောသူများ၊ အထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးရှိသူများကသူတို့သည်တစ်ကိုယ်တော်လိင်မပါဘဲအသက်ရှင်နိုင်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ကြသည်။ သို့သော်တစ်ကိုယ်ရေနေသောသူများ၊ သို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကို၎င်းတို့၏လိင်စိတ်ဆိုင်ရာအကျင့်ဓလေ့တွင်ထည့်သွင်းလိုသူများအတွက်ယခုသို့မဟုတ် abstinence အချိန်ကာလပြီးနောက်တွင်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုသေချာစေရန်သတိရသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုသင်ယူခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်အရာ၏အကြမ်းဖျင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်ပထမ ဦး စွာ - ဤအရာကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။
သင်အနှစ်သက်ဆုံးအစားအစာကိုစားရန်ထိုင်နေသည်။ တစ် ဦး ကအရသာ, ပါးစပ်ရေ, ကျေနပ်စရာမုန့်ညက်။ သငျသညျ - က) တစ် ဦး ချက်ပြုတ်ပြပွဲကြည့်နေစဉ်တီဗီပေါ်တွင်တင်နှင့်သင်၏ပါးစပ်ထဲသို့ဂေါ်ပြား? ခ) စိတ်ပျံ့လွင့်စရာမရှိဘဲအစာစားပြီးလျှင်အခြားအစာစားခြင်းကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ သို့တည်းမဟုတ် - ဂ) အရသာနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးကိုခံစားနေစဉ်စိတ်ပျံ့လွင့်စရာအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးစားပါ။ အဖြေက C. ဖြစ်သည်။ သင်သည်ယင်းကို“ သတိရ” စွာစားလိမ့်မည်၊ ယခုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအပန်းဖြေမှုတစ်ခုနှင့်ယခုပြုလုပ်ရန်သင်ယူတော့မည်။
အောက်ဖော်ပြပါလေ့ကျင့်ခန်းများသည်လိင်စိတ်ကုသသူများကလူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်များကိုပိုမိုသိရှိလာစေရန်နှင့်ထိတွေ့မှုကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသော Self-focus လေ့ကျင့်ခန်းများကိုအခြေခံသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံကိုအာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်သင့် ဦး နှောက်ကိုအမြင်အာရုံပုံရိပ်များဖြင့်ဖြည့်စွက်မည့်အစားယခုအချိန်တွင်ရှိနေနိုင်သည်။ လိင်ကုထုံးတွင်ဤလေ့ကျင့်ခန်းများသည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ နှောင့်နှေးသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုနှင့်အချိန်မတန်မီသုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းကိုကုသရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ သို့သော် PIED ကိုညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်အတူတူကုသသောအခါတွင်လည်းအလားတူထိရောက်မှုရှိသည်။
သင်မစတင်မီဤလေ့ကျင့်ခန်းများသည်အချိန်နှင့်လေ့ကျင့်မှုလိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ သင်၏အတွေးများသည်တုန်လှုပ်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့ပြုလုပ်သည့်အခါသင်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာနှင့်ခံစားချက်ကိုပြန်အာရုံစိုက်ပါ။ ၎င်းသည်အစပိုင်းတွင်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာဖြစ်နိုင်ပြီး၊ ထူးဆန်းနေဟန်ရှိသော်လည်းသင်၏ ဦး နှောက်ကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ညစ်ညမ်းမှုမဟုတ်ဘဲနှိုးဆွခြင်းအရင်းအမြစ်အဖြစ်ထိတွေ့ခြင်းမှတဖြည်းဖြည်းပြန်လည်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။
လေ့ကျင့်ခန်း 1- အထွေထွေခန္ဓာကိုယ်အသိအမြင်
သင်စတင်ရန်၊ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီသီတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းအနည်းဆုံး ၃ ကြိမ်လေ့ကျင့်သင့်သည်။ ၂။ သင်မစတင်မှီဖုန်းကိုပိတ်ပါ၊ အခြားအိမ်ထောင်စုဝင်များလည်းရှိလျှင်သူတို့ကိုပြောပြပါ။ နှောင့်အယှက်ခံရဖို့မရှိကြပေ။ ဒါ သင့်ရဲ့ အချိန် - ကကာကွယ်ပေးသည်။
သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျှင်သင့်ကိုယ်သင်ရေချိုးရန်စတင်ပါ။ (သင်ရေချိုးမထားပါကရေချိုးလိမ့်မည်။ ) သင်အကြိုက်ဆုံးရေချိုးရေမြှုပ်သို့မဟုတ်ရေနံကိုရွေးချယ်ပါ။ ယခုခြေလှမ်းနှင့်အနားယူပါ။
သင့်အသားအရေပေါ်ရှိရေပူနွေးခြင်းကိုခံစားပါ။ သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင်အပူချိန်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုခံစားရခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ဘယ်လိုသင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပတ်လည်ရေကိုရွေ့လျားဘယ်လိုခံစားရသလဲ ယခုတွင်သင်၏လက်များသို့မဟုတ်ရေမြှုပ်ကောင်နှင့်ဆပ်ပြာကိုအသုံးပြုလိုပါကသင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုတစ်ပြိုင်တည်းသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပါ။ သင့်အရေပြား၏ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်သင့်ထိတွေ့မှုကိုအထိခိုက်မခံဆုံးသောနေရာများသတိပြုပါ။ မတူညီသောထိတွေ့မှုများကသင့်ကိုရှင်သန်စေသလားသို့မဟုတ်အနားယူပါသလား။ ခဏကြာလျှင်ရေ၏ခံစားချက်များကိုဆက်လက်ခံစားကြည့်ပါ။ သင်၏စိတ်သည်ပျံ့လွင့်လာပါက၎င်းကိုလက်ရှိအခိုက်အတန့်သို့ညင်ညင်သာသာပြန်ယူလာပါ။
သင်ရေချိုးပြီးသည့်အခါသင်၏ရေချိုးခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုခြောက်သွေ့အောင်ဘယ်လိုခံစားရသလဲဆိုတာအာရုံစိုက်ပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်နူးညံ့စွာသို့မဟုတ်ခက်ထန်စွာပွတ်တိုက်ခြင်းကိုပိုနှစ်သက်ပါသလား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခြောက်သွေ့အောင်လုပ်တာကောဘယ်လိုလဲ။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်တွင်ခံစားချက်ကွဲပြားနိုင်သည်။ သင်၏အချိန်ကိုယူပါ၊ သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုအလှည့်ကျခြောက်ပါ။ သင်ပြီးသွားတဲ့အခါသင်ဘယ်လိုခံစားရလဲစဉ်းစားပါ။ လျှော့ပေါ့? စိတ်အားထက်သန်? စိတ်ရှုပ်လား? ကိုယ့်ကိုကိုယ်အချိန်များစွာအကုန်ခံပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားမိရင်ဒါမှမဟုတ်သင်ဟာသင့် ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်လွင့်စင်အောင်လုပ်ပြီးအာရုံခံကိရိယာအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာသတိရပါ။ သင်၏ရည်မှန်းချက်မှာသင်၏လိင်စိတ်နှင့်လိင်မှုကိစ္စကိုညစ်ညမ်းမှုအပေါ်မှီခိုခြင်းမှလွတ်မြောက်ရန်သတိပြုပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း 2- ထိ Reception တိုးမြှင့်
လေ့ကျင့်ခန်း ၁ ကိုထပ်မံလုပ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ သင့်ကိုယ်ခန္ဓာခြောက်သွေ့သောအခါအကြိုက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ဆေးရည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်မနံ့သာများကိုပိုနှစ်သက်ပါလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်ဆီတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင်၏မျက်နှာမှ စတင်၍ ခြေချောင်းများအထိဖြည်းဖြည်းချင်းအလုပ်လုပ်ပါကအရေပြားသို့လိမ်းဆေးကိုချောမွေ့စွာလိမ်းပေးပါ။
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုမည်သည့်ထိတွေ့မှုကနှစ်သက်သည်ကိုသုံးသပ်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောဖိအားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလေဖြတ်နှင့်အတူစမ်းသပ်။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်လေဖြတ်မည့်လမ်းကြောင်းကိုမည်သည့် ဦး တည်ချက်ကနှစ်သက်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အမျိုးမျိုးကိုသတိပြုမိရန်အချိန်ယူပါ။ ဥပမာအားဖြင့်သင့်ရင်ဘတ်သည်သင်၏နွားသငယ်များထက်ပူနွေးကြောင်းသင်တွေ့ရှိကောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ သင့်အသားအရေ၏ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ဆံပင်ပုံစံမျိုးကွဲပြားမှုကိုလည်းသတိပြုပါ။ သင်၏အောက်ပိုင်းဝမ်းဗိုက်၊ တင်ပါးများ၊ တင်ပါးများနှင့်အတွင်းပိုင်းပေါင်များအပေါ် ပိုမို၍ အာရုံစူးစိုက်ရန်ယခုသင်၏လက်များကိုရွှေ့ပါ။ ထိတွေ့မှုအမျိုးမျိုးကိုစမ်းသပ်ပါ။ မည်သည့်ဖိအားနှင့်လေဖြတ်ခြင်းသည်သင့်အတွက်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သည်ကိုသတိပြုမိပါသလား။
ယခုသင်သည်သင်၏လိင်အင်္ဂါareaရိယာကိုအာရုံစိုက်ပြီးသင်၏အချိန်ကိုယူပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာထိတွေ့မှု၏အာရုံကိုပိုမိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ။ သင်ကိုယ်တိုင်နှိုးဆော်ခြင်းခံရနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်မရနိုင်ခြင်း - အရေးမကြီးပါ။ ပထမ ဦး စွာသင်၏ဆီးခုံမို့မို့ဆံပင်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုခံစားပါ။ သင်၏လိင်တံနှင့် scrotum ပေါ်တွင်သင်၏လက်ချောင်းများကို run ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်သင့်လက်၌အလေးချိန်သတိပြုပါ။ အပူချိန်အမျိုးမျိုးကိုသတိပြုပါ။ သင်ဆက်လက်ထိတွေ့စဉ်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကိုသင်ခံစားနိုင်ပါသလား။ မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာလှည့်လည်သွားတဲ့အခါအရင်ကလိုပဲညင်ညင်သာသာပြန်ယူလာပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြမ်းတမ်းစွာမစီရင်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်ကျွမ်းကျင်မှုအသစ် ဖြစ်၍ အချိန်ယူရမည်။
သင်ပြီးဆုံးသွားသောအခါသင့်အကြောင်းအသစ်သောအရာများသို့မဟုတ်သင်သိထားပြီးဖြစ်သောအရာများကိုအတည်ပြုပြီးမည်ဟုသင်မျှော်လင့်မိသည်။ သင်ဘယ်လိုစိတ်ခံစားမှုခံစားရသလဲ စိတ်အေးအေးထားပါ၊
လေ့ကျင့်ခန်း3- လိင်အင်္ဂါ arousal
ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လေ့ကျင့်ခန်း ၁ နှင့် ၂ - သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားဒေသများကိုအာရုံစိုက်ရန်မလိုပါ။ သင်စိတ်အေးလက်အေးနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုခံစားနေရကြောင်းသေချာစေရန်လုံလောက်စွာရှည်လျားစွာဖြုန်းပါ။
ယခုသင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်မှုကိုသိပြီးဖြစ်သောသင်၏အနိမ့်ဝမ်းဗိုက်၊ တင်ပါးနှင့်တင်ပါးကိုထိရန်အချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းပါ။ သင်၏လိင်အင်္ဂါဆီသို့ဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်လေ့လာပါ။ သင်သည်သင်၏လိင်တံအထက်သို့ရောက်လျှင်သင်၏ဆီးခုံမို့မို့အရိုးကိုခံစားရနိုင်သည်။ ယခုတွင်သင်၏လက်မနှင့်လက်တစ်ချောင်းကိုသင်၏ကုတ်အင်္ကျီရှေ့၊ လိင်တံအောက်ပိုင်းနှင့်ဝှေးစေ့အထက်တွင်ထားပါ။ ညင်ညင်သာသာညှစ်ပါ။ ဆီးအိမ်၏ဆီးခုံနား (vas deferens) အနီးရှိဝှေးစေ့နှင့် Urethra ကိုဆက်သွယ်သောပြွန်ကိုသင်ခံစားရလိမ့်မည်။ ယခုသင်၏လိင်တံ၊ scrotum နှင့်သင်၏ scrotum (perineum) နောက်ကွယ်ရှိgရိယာကိုညင်သာစွာထိုးပါ။ ထုတ်လုပ်သောအာရုံကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်ပါ။
ထိတွေ့မှုအမျိုးမျိုးကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ မည်သည့်ထိုးနှက်ထိတွေ့မှုသည်အထိခိုက်မခံဆုံးဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ သင်၏လိင်တံသို့မဟုတ်ကပ်တိတ်၏မည်သည့်othersရိယာများသည်အခြားသူများထက် ပို၍ ထိခိုက်လွယ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ သင်၏အချိန်ကိုယူပြီးတတ်နိုင်သမျှသင်ယူပါ။ အချို့လူများကသူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကြည့်မယ်ဆိုရင်အာရုံစိုက်ဖို့ပိုလွယ်ကူသည်
သင်နှိုးဆွခံရလျှင်ဖြစ်ပျက်နေသောအပြောင်းအလဲများကိုသတိပြုရန်အခွင့်အလမ်းကိုသုံးပါ။ Arousal ကသင့်ကိုပူနွေးစေတယ်၊ ​​တစ်ခါတစ်ရံရင်ဘတ်နှင့်လည်ပင်းတွင်အရည်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ သင်၏ scrotum သည်မှောင်လာပြီးအရေပြားထူလာလိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့ဝှေးစေ့များထတက်လာပြီးသင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နီးကပ်လာလိမ့်မယ်။ သင်၏လိင်တံမှောင်မိုက်လာပြီးသွေးဖြူလာသောအခါသွေးပြန်ကြောများထွက်လာနိုင်သည်။ အရောင်ပြောင်းလဲမှုသည်အသားအရေကိုသာသိသာထင်ရှားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်စိုက်ထူမှုတစ်ခုရရှိလျှင်၎င်းသည်မည်သည့်ထိတွေ့မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းနှင့်မည်သည့်ထိခြင်းက၎င်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်ကိုသင်အတိအကျသိပါသလော။ သင့်မှာစိုက်ထူမှုမရရှိရင်တော့စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်ဆက်လုပ်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်၏စိတ်သည်လှည့်စားနေပါကအခြားအရာတစ်ခုခုကို လုပ်၍ လုပ်ပါ။
သင်၏နှိုးဆွမှုတိုးပွားလာပြီးသင်သုက်ထုတ်လိုပါကသင်၏လိင်အင်္ဂါများနှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးရှိအာရုံများကိုအာရုံစိုက်ပါ။ မင်းရဲ့အသက်ရှူမှုကပိုလေးလာပြီလား ထိတွေ့မှုနှင့်ထိတွေ့မှုကိုထိတွေ့စေသည့်ထိတွေ့မှုနှင့်ထိတွေ့မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသလား။ အချိန်ယူပါ၊ အာရုံစိုက်ပါ။ ပုံမှန်ထက်ပိုကြာလျှင်သင်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေသည်ဟုသင်ခံစားရပေမည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏စိုက်ထူမှုကိုစတင်ဆုံးရှုံးသွားပါကစိတ်မပူပါနှင့်၊ သင်လေ့ကျင့်ခန်းကိုနောက်တစ်နေ့တွင်ထပ်လုပ်ပါသို့မဟုတ်သင့်အားလှုံ့ဆော်ပေးသောသင်လေ့လာပြီးဖြစ်သောထိတွေ့မှုသို့ပြန်သွားနိုင်သည်။
သတိရပါ၊ ဤလေ့ကျင့်ခန်းများ၏ရည်မှန်းချက်သည်ညစ်ညမ်းမှုထက်တုံ့ပြန်မှုကိုတုံ့ပြန်ရန်သင်၏ ဦး နှောက် (နှင့်သင်၏လိင်တံ) ကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင့်အား porn နှင့် fantasy free solo sex ကိုခံစားခွင့်ရရှိစေရုံသာမကမိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အပြည့်အဝရှိနေရန်နှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၏တုန့်ပြန်မှုကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် porn အခမဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဤလေ့ကျင့်ခန်းများကိုအသုံးပြုခြင်းများရှိသော်လည်းသင်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်လျှင်သင်၏တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောလိင်ကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအချို့ကိုစာရင်းပြုစုခြင်းသည်အကျိုးရှိနိုင်သည်။
Paula ခန်းမ, လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအထူးပြုသည်။ သူမသည်လိင်စွဲလမ်းမှုကိုနားလည်ခြင်းနှင့်ကုသခြင်း (Routledge 2012) ၏စာရေးဆရာဖြစ်ပြီး Kick Start Recovery Program ကိုဖန်တီးသူဖြစ်သည်။ www.sexaddictionhelp.co.uk